Stadia, barnaamijka cusub ee Google ee khadka tooska ah ee Google, ayaa yimid | War gadget
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Dhacdooyinka, General, Soojeedinta
Waxaan ku dhawaaqi jirnay, Waxay ahayd waqti uun ka hor intaan Rafaaalka weyn ee leh caasimada G uu xiiseynayay ciyaaraha fiidiyowga. Oo sidii la isla dhexmarayay bilihii la soo dhaafay, xilligaas ayaa yimid. Stadia, Meel cusub oo loogu talagalay "gamers" kaas oo Google uu si buuxda ugu soo galo adduunka ciyaaraha fiidiyowga durba waa xaqiiqo. Iyo wanaag ama xumaan, cidna ugama tagin cid aan dan ka lahayn.
Finalmente MA HELI doono Konsol Google ah. Qaar badan waa niyad jab tan iyo markii ay doonayeen inay arkaan waxa Google awood u leeyahay soo saarista iyo wax ku biirinta warshadan. Laakiin dhinaca kale, fikradda ah inaad awood u leedahay inaad ciyaarto dhammaan ciyaarahaaga, shaashad kasta iyo wakhti kasta, sidoo kale ayaa soo jiidatay dareenka waana la jeclaaday wax badan. Waan ogayn in Google uusan noogu yeeri doonin wax soo bandhig leh wax aan caadi ahayn, waana ay leedahay.
1 Stadia maahan qunsuliyad ... laakiin waan jecel nahay
2 La wadaag ciyaartaada cidda aad rabto xilligan
3 Ma jiraan qalab Stadia ah
4 Waxa aan wali ka ogayn Stadia
Stadia maahan qunsuliyad ... laakiin waan jecel nahay
Anagoo ogsoon awooda ay Google ku leedahay heerka horumarka, waxaan filaynay wax muhiim ah. Toddobaadyo ayaa laga faalloonayay warbaahin kala duwan in waxa uu u imaan doono inuu na tuso ay noqon doonaan wax la mid ah Netflix ah ciyaaraha. Laakiin tani waa wax taas ma cadaXitaa lama hadlin hadal ku saabsan rukunka ama qiimaha lebiska ee cayaaraha. Marka si hufan ugama hadli karno nooca adeegga aan isku halleyn karno.
Wixii Google isku dayey inuu na soo diro fikrad aad u cad. Mustaqbalka, weligoodba uma baahnin qunsuliyad si aan u ciyaarno kulamada aan ugu jecel nahay. Waan la socon karnaa ciyaarta aan ka bilaabayno laptop-ka TV-gayaga. Oo markaan baxayno, raac isla ciyaar isla daqiiqaddii aan ku jirnay taleefanka casriga ah. Labada xaaladoodba waxay umuuqdaan horumar dhab ah, waana jecelnahay tan. Laakiin leh faahfaahin badan oo la cayimay xilligan la joogo.
Riwaayad kale oo ka hadlaysa ciyaarta ay Stadia bixin doonto ayaa ah suurtogalnimada in shaashad la wadaago. Suurtagalnimada kuxiran ciyaarta, illaa iyo hadda waxay umuuqatay mid murugsan. Awoodda xisaabinta ee looga baahan yahay in lagu bixiyo ikhtiyaarkan waxay ahayd mid aan la gaari karin, in kasta oo ay u muuqato in Stadia ay dhaqso uga saari doonto caqabadahaas ayna soo dhaweyn doonaan cayaartooydu.
Google wuxuu rabay inuu helo kan ugu fiican adduunka ciyaaraha fiidiyowga. Waxayna yeelatay shirkado halbeeg u ah qaybta. Laakiin sidoo kale tabarucaadka ay soo saari karaan warshadaha yaryar ee adduunka ciyaaraha. Sidaas darteed, Google waxay siisaa dhammaan wararka loo abuuray horumariyeyaasha dhammaan shirkadaha iska kaashaday abuurista Stadia. Sidan oo kale, waxaa la hubiyaa in, iyadoo la adeegsanayo dhammaan awoodaha weyn ee 'G', ay ku sharadeen abuuritaanka nuxurka barnaamijkan cusub.
La wadaag ciyaartaada cidda aad rabto xilligan
Mid ka mid ah waxyaabaha ay jecel yihiin taageerayaasha ciyaarta ayaa ah awood u la wadaagto ciyaartaada inta kale. Is dhexgalka ciyaartoyda kale ee ciyaarteena si toos ah ayaa loo samayn doonaa. Oo sidii aan ku aragnay fiidiyaha mudaharaadka way badan yihiin fudud mahadsanid badhanka heeganka ah loogu talagalay Inaad karti u yeelatid ciyaartoy kale cayaarteena waxay noqon doontaa mid dareen leh oo dhaqso leh. Iyo wixii ka sarreeya waxaan ka qaban karnaa masraxa laftiisa iyo iyadoo aan loo baahnayn in la joojiyo ciyaarteena.
Haysashada ikhtiyaarro sidan oo kale ah oo ah in ciyaartoy lagu daro ciyaar duulimaad ah waxaa xaqiijin kara dhowr qof, oo Google ayaa ka mid ah. Waxaa sidoo kale la shaaciyey intii la soo bandhigayey shalay in Stadia ay soo bandhigi doonto qaar tilmaamo gaar ah ciyaar kasta. Wax ku saabsan wixii la isla dhexmarayay toddobaadyadii la soo dhaafay. Laakiin wax aanaan haysan ayaa ah is dhexgalka hagaha laftiisa ciyaarta. Taasina waxay naga caawin doontaa inaan bixinno «Xalka» waqtiga saxda ah ee aan bilaabayno. Horumar kale oo aan jecel nahay.
Stadia, ugu yaraan hadda, wax kale maahan madal loogu talagalay ciyaaraha oo leh qayb fikradeed oo weyn taas oo ay jiraan waxyaabo badan oo lagu cayimaayo. Madal, haa, cabirkeeduna waa sida Google oo kale. Iyo inay ku saleysan tahay xarumaha xogta ee Google ku leedahay dhulkeenna oo dhan. Layaab ma leh, hal-ku-dhigyadiisii ​​ugu badnaa ee maanta soo noqnoqda ayaa noqday "Xarunta xogta waa madal aad".
Ma jiraan qalab Stadia ah
Sidii aan bilowgiiba nidhi, innagoo og in Google ugu dambayntii uusan ku khamaarin abuuritaanka qalab-jireed ayaa niyad jabinaya qaar. Laakiin fikradda ay soo jeedinayaan uma baahnid aalad kale sidoo kale waa horumar. Taageerayaasha ciyaarta iyo isticmaaleyaasha tiknoolajiyadda aasaasiga ah waxay isticmaalaan ugu yaraan laba, saddex iyo illaa afar qalab maalintii. Ugu yaraan, iyo ugu yaraan daruuri, waxaan isticmaalnaa casriga maalin kasta. Tan waxaan ku darnaa, laga yaabee, qaar ka mid ah sameecadaha dhagaha. Kadib laptop-ka, iyo haddii aan rabno inaan ciyaarno, sidoo kale qalabka.
In kasta oo aanan ka takhalusi karin hal cunsur oo muhiim ah si aan uga dhigno waayo-aragnimada ciyaaraha gebi ahaanba abaalmarin, kantaroolaha. The Maareeyaha Stadia, oo sawirro horay looga soo duubay, ayaan ka helnay. Iyada oo leh naqshad dhaqameed taas oo qarineysa tiknoolajiyaddii ugu dambeysay sida badhanka si aan toos ula wadaagno ciyaarta Youtube, ama midda kaaliyaha codka. Waxay yeelan doontaa ku amraya USB Nooca C, isku xirnaanta wifi, dekedda jack headphone iyo saddex dejimaha midabka.
Waan aragnaa sida Qalabka "Ka saar" adigoon waayin wax kale, ciyaartuna runtii wax cusub ma ahan. Inaad awood u leedahay inaad ciyaarto ciyaaro la mid ah tan iyo hadda, iyo inbadan oo kale, adigoon u baahnayn qunsulka. Ama telefishanka aan had iyo jeer ku xirno wuxuu ka dhigayaa dhaqdhaqaaqa mid aad u weyn. Taasna sidaan uga faallaynay, waan sameyn karnaa innaga oo aan laga adkaan ciyaarta oo aan raacno isla dhibic isla markaana ka dhigno mid sii wanaagsan. Sanduuqyo ma jiraan, lama soo dejin karo, xaddidna malahan.
Waxaan markasta jecel nahay inaan markhaati ka noqono horumarka. Stadia waxay shaki la'aan noqon doontaa kahor iyo kadibba warshadaha ciyaarta fiidiyowga ee weyn. Horusocod sidii had iyo jeer u fiicnaan doonta adeegsadayaasha. Taasna waan sugeynaa in u adeegaan si kuwa sida tooska ah ugu loolama sida Microsoft ama Sony fiiro gaar ah hagaajinta iskuna day inaad ka gudubto. Way cadahay taas warshaduhu waxay marayaan isbeddello waana arki doonaa haddii shirkadaha intiisa kale ay awoodaan inay raacaan Google marxaladan cusub.
Waxa aan wali ka ogayn Stadia
Ka dib soo bandhigid madadaalo iyo firfircoon ka dib, su'aalo dhowr ah ayaa weli ku jira dhuunta. Waan la joognaa dhowr su'aalood oo runtii muhiim ah. Waxaa nala dhigay Google si aan waxbadan uga ogaano kaydka ciyaaraha ay Stadia yeelan doonto xagaaga. Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aan naloo sheegin, oo ay ka mid yihiin dhowr muhiimad weyn. Mid ka mid ah shakiga weyn ee toddobaadyadan jira, oo sii wadi doona inuu ku sii jiro hawada, waa howlaha heer ganacsi ee Stadia.
Miyay ku shaqeyn doontaa rukhsad bille ah? Ma ogin haddii aan awoodi doonno inaan u isticmaalno Stadia annaga oo bixinayna khidmadda bil kasta ah. Dabcan, ma ogin, haddii ay sidaas tahay, intee in le'eg ayaan ka hadli lahayn. Tani ma aysan cadeyn. Ikhtiyaarka kale, haddii aysan ahayn adeeg rukumo, waxay noqon kartaa inaad iibsato cayaaraha, ama xitaa waxaa jiri kara nooc ka mid ah "kireysi" ciyaar kasta. Waan sii wadaynaa inaan sameyno mala-awaal ilaa Google uu in badan noo caddeeyo.
Mid kale oo ka mid ah qodobbada muhiimka ah, garan mayno shuruudaha ugu yar ee xawaaraha isku xirka inaan u baahan doono inaan adeegsanno Stadia. Gaar ahaan iyada oo la tixgelinayo go'aannada looga hadlayo soo bandhigga 4K HDR ee 60 FPS. Faahfaahin muhiim ah oo ku saabsan, iyadoo la tixgelinayo isku xirnaanta aan leenahay, si loo ogaado haddii aan ka ciyaari karno barnaamijka cusub ee Google.
Dabcan, dhammaan taageerayaasha adduunka ciyaaraha, waa waa lagama maarmaan in la ogaado buugga ciyaarta oo aan ku tirin karno. Dareenkan, Google ayaa na soo xiganaya xagaaga. Marka waxaan wali sugeynaa dhowr bilood si aan u ogaano waxaas aan la ogeyn iyo kuwa kale oo badan oo hawada ku haray shalay. Sharad ku helida barxad wali waxbadan laga ogaanayo, oo aad muhiim u ah, waxay umuuqataa qatar. In kasta oo aan jecel nahay fikradda la muujiyey iyo horumarku waa wax ku ool ah heerka ciyaarta iyo tiknoolajiyadda annaga sug sugida inaad waxbadan kabarato Stadia.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Stadia, barnaamijka cusub ee Google ee khadka tooska ah ee ciyaaraha, ayaa yimid
Alaabada Koogeek ee ugu Fiican ee Iibinta ee Amazon